सानिमा लाइफले भोली देखि आईपीओ निष्काशन गर्दै, कहिले सम्म दिने आवेदन ? – OnlinePahar
सानिमा लाइफले भोली देखि आईपीओ निष्काशन गर्दै, कहिले सम्म दिने आवेदन ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:१३ Basanta Khanal	0 Comments	IPO niskashan
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले भोली देखि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्काशन गर्दै छ। कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्न लागेको हो। कुल ६० लाख कित्ता शेयरमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख कित्ता कर्मचारीहरुलाई र अर्को ५ प्रतिशत सामूहिक लागनी कोषहरुलाई सुरक्षित गरेको छ।सर्वसाधारणले बाँकी ५४ लाख कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। इन्स्योरेन्सले कुल जारी पूँजीको ३० प्रतिशत प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको हो।सो आइपीओमा छिटोमा साउन २४ गते र ढिलोमा भदौ २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि ३० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। इच्छुक आवेदकले सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरोशेयर वेबसाइट तथा एप मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ। आईपीओ बाँडफाँटपश्चात इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् : काठमाडौं : आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्ने भएको छ । आइपीओ जारी गर्न आत्मनिर्मरले सनराइज क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सौगत बीर चौधरी तथा सनराइज क्यापिटको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजय लाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । आत्मनिर्भरको रजिष्टर्ड कार्यालय घोराही, दाङमा रहेको छ ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – १९ साउन २०७८ मंगलवारको राशिफल पढौं
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – २० साउन २०७८ बुधवारको राशिफल पढौं →
भन्सार छुटमा आयात गरिएका स्वास्थ सामग्रीको खुद्रा मूल्य सार्वजनिक
२८ माघ २०७७, बुधबार १८:३७ Basanta Khanal	0